Semalt Expert Anotsanangura Nzira 10 Dzakashandura IWeb Web Scraping Tools
Kugadzirwa kwewebhu kwakaitwa nenzira dzakawanda, uye kune zvakasiyana nzira dzokuita imwe basa. Iyo inzvimbo yakamhanya ine zviitiko zvinoshingaira, zvidzidzo zvinokurudzira uye kubudirira kunobudirira mumasimba euchenjeri hwemagetsi, kubatana kwevanhu-kombiyuta, nekunyorwa kwemashoko. Iko yekutsvaga webhupu zvishandise kutora, kutora uye kubvisa tsanangudzo yakasarudzwa, zvichikupa nemafungiro akanaka - fix my computer problems free online. Zvishandiso zvakasiyana-siyana ngazviite kuti uunganidze dhamusi kubva kumazana kusvika kune zviuru zve URL mukati memasekondi. Heano dzimwe nzira dzekushandisa matanda ekutsvaga webhu.
1. Nhauriro nevateveri
Makwikwi emakwikwi uye mapurogiramu ezvehupfumi ndiwo nzvimbo yakanaka yekuongorora zvinhu. Zvichida, iyo ichazarura masuo ako kuti ushandise maitiro e skyscraper uye unovaka nheyo dzevhizimisi vebhizimisi rako. Iwe unogona kuonawo kuti vangani vateereri vanezvo uye kuti vangani vanhu vari kuongorora uye kufananidza mapeji avo. Dhaka yakabudiswa zvakanaka inogona kukubatsira kuti uwane ruzivo pamusoro pomupikisano wako, kupa mararamiro ako kune vateveri mumasangano ehupfambidzani uye kutyaira mune mamwe magwagwa kune webhusaiti yako.
Mutsva wakanaka achabatsira, kuona, kupora uye kuwana ruzivo kubva pamapeji akasiyana ewebhu. Tinogona nyore kuchengetedza minwe yedu pamapikisa evakwikwidzi vedu uye kuwana pfungwa yezvigadzirwa zvavo, mapurogiramu ekutsvaga, mavoti eblogi, uye maitiro ekutengesa. Nezvinyorwa zvakanaka, tinogona kugadzirisa maitiro edu ekutengeserana uye shanduko iyi ichabetsera bhizinesi redu.
Unogona kutsvaga ruzivo runobva kuna Yelp, Google, Trustpilot, TripAdvisor, Zomato, Amazon uye Yahoo semakambani makuru kuti aone kuti vatengi vakazviongorora. Tendeukira kumasikirwo emagariro evanhu uye tsvaga marongerwo kana michina kuti uwane dhiyabhorosi dhenda kuti iparwe. Ichi chinyorwa chakatsvaga chinogona kushandiswa kubatsirwa kubva mukukwikwidza kwekukwikwidzana, kukwidza, uye nyaya.
4. Mutengo wekuenzanisa
Unogona kuverenga dhidha yekutengesa mutengo uye kutevera. Zvakakosha kuziva izvo vadzikwi vako vari kubhadhara kune chimwe chigadzirwa uye kuti mishonga yakawanda yeiyo mutsara inowanika pawebsite dzavo. Kuenzanisa kwekukosha kwakakosha kune vatengesi vekuInternet, uye zvakagadzirirwa dzira ndiyo nzira chete yekuenzanisa nemitengo nenzira iri nani. Semuenzaniso, magoroka ezvitoro (Sainsbury, Waitrose, uye Tesco) vanoshandisa web scraping sechimwe chikamu chemaitiro avo emitengo..Vanotsvaga zvinhu zvakawanda zuva rimwe nerimwe uye vanoshandisa ruzivo urwu kuti vaenzanise nemitengo yemiti yakasiyana-siyana.
5. Kutsvaga Engine Optimization
Kufambisa kwepaiti kunosvika nenzira dzakasiyana-siyana, dzakadai sedharabharo, kuburitswa kwemashumo, emaimeri, kutumira uye nevamwe. Kune vazhinji vedu, ihoyo yekutsvaga kwehupenyu iyo inoshumira chikamu chakakura chechipiri. Asi kune vamwe, motokari iyi hairevi chinhu uye inotarisa pakutsvaga injini yekutsvaga kupfuura chero imwe sarudzo.
6. Ongororo yepamusi
Vose vebhizimisi vanoziva kuti kutsvakurudza kwemusika chikamu chinokosha chebhizimisi. Iwe unofanirwa kutarisa mikana, maitiro, uye kutyisidzira kuburikidza nekutsvakurudza kwemakethe. Kana imwe nyaya ichinyorwa kubva kumakwikwi emasimiti, ruzivo rwose runowanikwa zviri nyore, uye iwe unogona kuwana pfungwa yekukura nayo bhizinesi rako nekutsvakurudza kwakanaka kwemashamba. Iro web scrapers inogona kubvisa dambudziko rinodiwa kubva kumakambani ekutsvakurudza emusika, analytic providers, zvinyorwa zvepaIndaneti, mawebsite emashoko nemabhizimusi emabhizimisi. Iwe unogona kushandisa zvinyorwa izvi uye wedzera network yako pasi rese.
Kana uri kutsvaga basa idzva, unofanira kuparadzira zvakawanda zvebasa rezvemabasa, masayenzi ezvekugarisana nevamwe, uye maforamu. Iwe unogona kuwanawo ruzivo runobatsira kubva kune nhare dzejw.org uye kuiswa mazita. Uye kana iwe uri kutsvaga vakakodzera zvakakodzera sangano rako, unogona kutendeuka ku data rakatsvaga uye unononga mhinduro zvichienderana nezvaunoda. Munzira ipi neipi, webhuti yekugadzira zvishandiso ichakuwana iwe ruzivo runobatsira pamusoro pezviri kuitika mumusika wemabasa, kuunganidza sei vanyori vakarurama uye kuti vangaita sei kurota basa.
Isu tose tinotenga zvigadzirwa nemashandi paIndaneti. Sezvo mutengi, tinokwanisa kuenzanisa nekubatanidza zvinyorwa kuti tive nemashoko anobatsira. Tinogonawo kuenzanisa nhamba uye kugadziriswa kuti tizive kuti zvipi nezvibereko zvakakosha zvakanyanya. Semuenzaniso, unogona kuunganidza mazita emotokari yakashandiswa inoenderana nezvinodiwa kubva kune nzvimbo dzakasiyana-siyana. Zvimwewo, unogona kutarisa maongorori emafoni ehurumende akasiyana-siyana kuti ave nemafungiro emhando ipi iyo inotungamirira vamwe. Dzimwe dzezvisarudzo dzakanakisisa dziri iPhone, Windows Mobile, uye BlackBerry.
9. Kugadzirisa Kwemari
nokuda kwekuwana mari. Ichaita kuti zvive nyore kwauri kuti uwane zvido zvaunoda kuti ugare uine ruzivo pamusoro pezvino maitiro ekutengesera.
10. Kutarisa Kutenga kana Kutenga
Kuti uwane pfungwa yakanaka yekutsvaga webhu, unofanira kufunga nezvemahofisi edzimba. Kana iwe uri kutsvaga kutenga kana kubhadhara chimwe chinhu, iwe zvechokwadi unoda kutsvaga deta uye uve nemafungiro emhando ipi yehupfumi ichakutorera iwe zvakanyanya. Sezvo muvhimi weimba, unogona kugadzira zvakarongeka zvemashoko kubva kune akasiyana-siyana, mazita, masangano e aggregation.